Ihe ndị a bụ ihe ngosipụta nke Samsung Galaxy Note7 | Gam akporosis
Ndị a bụ nsụgharị ndị nsụgharị nke Galaxy Note7
Na July anyị na-aga ozugbo ọzọ nke kacha mma igwe nke afọ nakwa na ọ ga-abụ onye na-ahụ maka ime ka o sie ike maka asọmpi ndị ọzọ, ọkachasị Apple na ya na iPhone ọhụrụ ya agaghị enwe isi ọhụụ na imewe dịka ekwuputara na ọ dịbeghị anya. Oghere na-ahapụ ọtụtụ ka ọ masị ha na ihuenyo ihu abụọ nke Galaxy Note7.
Ọ bụ ugbu a ka anyị nwere ya pịa nye oyiyi nke Samsung Galaxy Note7 nke ekpughere, ọzọ, nke Evan Blass, ma ọ bụ @evleaks, mgbe na leaked image urua. Ndị a sụgharịrị tinye anyị n'ihu ezigbo Galaxy Note7 nke anyị na-akwado aha ya. Ọnụ nke Samsung na-atụ anya iwepụ ahịa site na Apple iPhone na-esote site n'inwe nnukwu akụrụngwa na atụmatụ nke pụtara maka ụdị ahụ pụrụ iche nwere ihu ihu abụọ. A nnukwu itu ukwu anya maka Korean emeputa.
Ọ bụ ezie na anyị nwere ike ịtọ ụtọ na nnukwu ọhụụ nke nwere Galaxy Note7, obere ihe ọzọ anyị nwere ike ịghọta na ngwaike nke ọnụ. Ee, enwere Stylus, mana anyị nwere ike mechaa ebe a ma ọ bụrụ na anyị anaghị ekwu okwu banyere akụkụ nkuku ma ọ bụ ihe oyiyi ahụ nke anyị nwere ike ịhụ ọtụtụ Stylus na-egosi otu n'ime njirimara kachasị mma nke ngwaọrụ a.
Blass kwukwara na teknụzụ njirimara n'oge ahụ na ekwentị nwere 5,7 display QHD Super AMOLED ngosi, 64 GB dị n'ime nchekwa expandable site na microSD, igwefoto azụ 12 MP, 5 MP n'ihu, asambodo IP68 ma ga-abịa na agba atọ: ojii, ọla ọcha na acha anụnụ anụnụ.
Mwepụta nke Galaxy Note7 ga-abụ maka Ọgọst 2 dị ka a maara, n'ihi ya ihe na-erughị otu ọnwa na-enwe ike ikwu okwu na otu nke kasị mma Nkea nke afọ site Samsung iti ya rivals mgbe oké Samsung Galaxy S7 na S7 ihu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Samsung » Ndị a bụ nsụgharị ndị nsụgharị nke Galaxy Note7
Ná nkezi, ọ bụ naanị 5 pasent nke ndị ọrụ na-eme micropayments na ngwa
Vivo X7 na Vivo X7 Plus kpughere na China na mgbaji Snapdragon 652 na igwefoto 16MP